December 25, 2020 - Khitalin Media
လက်ရှိ ချစ်သူ နဲ့ ထာဝရ လက်တွဲသွားချင်တယ် ဆိုရင် ဒီ (၇) ချက်ကို လိုက်နာသင့်ပါတယ်
December 25, 2020 by Khitalin Media
ဒီအချက်လေးတွေကို လိုက်နာရင် သင်တို့ ချစ်သူနှစ်ဦး ရိုးမြေကျ ပေါင်းသင်းသွားနိုင်မှာပါ။ ၁။ ကြင်နာစွာ ချစ်ပါ။ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ကြင်ကြင်နာနာနဲ့ ချစ်ပေးပါ။ ဒါဆိုရင် နှလုံးသားချင်း နီးစပ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ကြင်နာမှု မရှိဘူးဆိုရင် သင်တို့အချစ်ရေးက ပျော်ရွှင်စရာ မကောင်းတော့ပါဘူး။ ၂။ သစ္စာ ရှိစွာ ချစ်ပါ။ ကိုယ့်ချစ်သူကို နှလုံးသားနဲ့ ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်လို့ သစ္စာရှိရှိ ချစ်သွားပါ။ ဖောက်ပြန်ဖို့ စိတ်ကူးမိတိုင်း ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် ပြန်ထိန်းဖို့ လိုပါတယ် ။ သစ္စာတရား မရှိတဲ့ အချစ်ရေးက ဘယ်တော့မှ မခိုင်မြဲနိုင်ပါဘူး။ ၃။ အမှန်တရား ကို ချစ်ပါ။ ကိုယ့် ချစ်သူ ကို ဘယ်တော့မှ မလှည့်စားပါနဲ့ ။ လိမ်ညာမှုတွေကို ဖက်တွယ်နေမယ်ဆိုရင် ချစ်သူနဲ့ ဝေးရဖို့ … Read more
သင့်ကိုခြွင်းချက်မရှိချစ်ကြောင်း ပြသနေတဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့အပြုအမူ(၈)ချက်
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ဆိုတာနဲ့ လိင်ကိစ္စမပါပဲ ကွဲပြားစွာတွေးတဲ့ သူဆိုတာ ရှားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိတွေ့မှုတွေမပါပဲ အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီး နှစ်ဦးကြား ချစ်ခြင်းကို သိမ်မွေ့စေတဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေလည်း ရှိပါတယ် …။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို လေးလေးနက်နက် ချစ်မိသွားတဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာ သူ့ရဲ့ခံစားချက်အစစ်အမှန်တွေကို မဖုံးကွယ်နိုင်အောင် ယခုလိုအပြုအမူလေးတွေနဲ့ သိသိသာသာ ဖော်ပြတတ်ပါတယ်နော် …။ ၁။ သူ့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကို ပြသရမှာ မကြောက်တတ်ဘူး… ယေဘုယျ အားဖြင့် အမျိုးသားတွေဟာ သူတို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကို မပြသချင်ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သင့်ပတ်ဝန်းကျင်က ကွဲပြားမှုတွေဟာ သင့်ကိုသူချစ်တဲ့ အချစ်စစ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်ပဲ သူ့ရဲ့ ကြောက်ရွံ့မှုတွေကို သင်ကို မျှဝေဖို့ မကြောက်တတ်သလို အားနည်းချက်ရှိတာတွေကို သင့်ကို ပြသတတ်ကြပါတယ် …။ ၂။ သင့်အတွက် အဆိုးဆုံးနေ့တွေမှာတောင် သင်သာလျှင်အလှဆုံးလို့ … Read more
နှုတ်ခမ်းချင်းနမ်းမလို့လား ….ဒါလေးတွေတော့ သတိထား
စစ်တမ်းတွေအရ ပြောရရင် စုံတွဲတွေက ပထမဆုံးအကြိမ် နှုတ်ခမ်းချင်း နမ်းပြီးနောက်မှာ သူတို့ရဲ့ အဖော်ကို စိတ်ဝင်စားမှု လျော့သွားတတ်ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အချစ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လူ့ယဉ်ကျေးမှု တစ်ခု နှုတ်ခမ်းချင်း နမ်းတဲ့ အနမ်းဆိုတာ “ငါမင်းကို ချစ်တယ်” ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်မို့ ချစ်သူတွေကြားထဲမှာ အဓိကကျတဲ့ အနမ်း တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိတဲ့ စုံတွဲတွေရဲ့ (၉၀) ရာခိုင်နှုန်းက နှုတ်ခမ်းချင်း နမ်းတဲ့ ….. အနမ်းကို နှစ်ဦးသားကြားထဲက ဘာသာစကားတစ်ခုလို ကျင့်သုံးကြတယ်လို့ ဆိုတဲ့အတွက် အဲ့အနမ်းကို အချစ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လူ့ယဉ်ကျေးမှု တစ်ခုအနေနဲ့လည်း သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ ဒီတော့ ချစ်သူရည်စားထားမယ်၊ အိမ်ထောင်ပြုမယ် ဆိုရင် နှုတ်ခမ်းချင်း နမ်းတဲ့အနမ်းကိုတော့ ဘယ်တော့မှ ရှောင်လွှဲလို့ ရမှာမဟုတ်တာ သေချာပါတယ်။ … Read more
အပြင်ပန်းသဏ္ဍန်မှာတည်ငြိမ်ပြီး အင်မတန်ဒေါသကြီးတတ်တဲ့ အင်္ဂါသားသမီးလေးတွေအကြောင်း
အင်္ဂါ သားသမီးလေးတွေ အကြောင်း အင်္ဂါတွေဟာ အပြင်ပန်းသဏ္ဍန်တည်ငြိမ်အေးဆေးစွာနဲ့နေတတ်ကြပေမဲ့အင်မတန်မှ ဒေါသကြီးတဲ့နေ့နာမ်တွေဖြစ်ကြတယ်… မဟုတ်ရင် မခံချင်ကြဘူး။ဒေါသဖြစ်ရင် အပြင်မှာပေါက်ကွဲကြတာထက် ပါးစပ်က ပူညံပူညံနဲ့ရေရွတ်နေ တတ်ကြတယ်… လူတွေအပေါ် ဖော်ရွေစွာနဲ့ခင်မင်တတ်ပါတယ်… ဝတ္တရားပျက်ကွက်မိ ရင်လည်း အပြန်ပြန်အလှန်လှန်တွေးပူနေတတ်ကြတယ်… မိသားစုတွေအပေါ်မှာ ပျော်ရွှင်မှုတွေပေးချင်တဲ့စိတ်တွေရှိကြတယ်…တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ပုံစံမျိုးပေမဲ့တခါတလေမိသားစုထဲမှာ ပေါကြောင်ကြောင်နိုင်တတ်ကြတယ်။ အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာသူများအပေါ်ဦးဆောင်လိုတဲ့စိတ်ရှိတယ်။ ကိုယ်လုပ်ရင် ကိုယ်အကောင်းလို့ထင်မြင်တတ်ကြတာအင်္ဂါ… အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လည်း ကြိုးစားတတ်ကြတယ်… အင်္ဂါတွေဟာ ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိတယ်တခါတရံ ကိုယ့်ကိုယ်ပင် ချီးမွမ်းတတ်တယ်..သူများတွေမြှောက်ပေးရင်တော့သိပ်မကြိုက်ဘူး.. အပေါင်းအသင်း သူငယ်ချင်းတွေကြားမှာအေးအေးဆေးဆေးနေတတ်ကြတာ အင်္ဂါပါ။ တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ အပြုံးတွေကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားကြတယ်. . ကိုယ့်အပေါ်ကောင်းတဲ့လူဆိုရင် လွယ်လွယ်နဲ့မမေ့တတ်သလောက် ကိုယ့် အပေါ်မကောင်းတဲ့လူဆိုရင်တော့ တသက်လုံးပြန်လှည့် မကြည့်တတ်ကြဘူး… အင်္ဂါတွေဟာတိရစ္ဆာန်လေးတွေကို အသည်းယားစွာနဲ့ ချစ်တတ်ကြတယ်.. အိမ်မက်ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေမက်ရင် သူငယ်ချင်းတွေကို သို့မဟုတ်မိသားစုထဲက လူတစ်ယောက်ယောက်ကို ပြန်လည်ပြီးပြောပြချင်တတ်ကြတယ်. . ဝမ်းနည်းစရာ တစ်ခုခုနဲ့ကြုံရင်မျက်ရည်လွယ်တတ်ကြတာအင်္ဂါပါ… တော်ရုံနဲ့မမေ့တတ်ကြဘူး။ သို့ပေမဲ့ မေ့ပြီးသွားရင်လည်း … Read more
ရည်းစားရှိတဲ့ သူတွေ နားမလည်နိုင်မယ့် Single ဘဝရဲ့ သူမတူတဲ့ ကောင်းကွက်လေးများ
ချစ်သူ ရှိတဲ့သူတွေက ချစ်သူ ရှိတာ ဘယ်လောက် ကောင်းကြောင်း ချီးမွမ်းခန်းဖွဲ့လေ့ ရှိကြပါတယ်။ ရည်းစားဘဝက ကောင်းတယ်လို့ ဆိုနေကြပေမယ့်လည်း သူ့မှာလည်း ဆိုးကျိုးတွေနဲ့ ပိုစိတ်ညစ်စရာတွေ ရှိလာစေတတ်ပါတယ်။ ချစ်သူမရှိတဲ့ Single လေးတွေကတော့ တကယ့်ကို ကောင်းကျိုးလေးတွေ ပေါများလွန်းလှပါတယ်။ သူတို့တွေရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝကတော့ ဒီအချက်တွေနဲ့ ပြည့်စုံနေပါတယ်။ ၁။ မိဘတွေကို ဂရုစိုက်ပေးနိုင်တယ် ၂။ အားလပ်ချိန်လည်း ရတယ် ၃။ စိတ်ညစ်စရာတွေ ပိုမလာဘူး ၄။ ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျ လုပ်နိုင်တယ် ၅။ ငွေပိုသုံးနိုင်တယ် ၆။ ဖုန်းဘေလည်း သက်သာတယ် ၇။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ပိုရှိလာတယ် ၈။ ကိုယ့်လုပ်နိုင်စွမ်း ကိုယ်သိတယ် ၉။ လွတ်လပ်မှုကိုလည်း သိတယ် ၁၀။ ဘဝအတွက် လေ့လာစရာတွေကိုလည်း … Read more
ချစ်သူကောင်မလေးကို ဒူးထောက်တောင်းပန်နေပေမယ့် ပစ်ပစ်ခွါခွါ လမ်းခွဲခံလိုက်ရတဲ့ကောင်လေး (ရုပ်သံ)
ချစ်သူကောင်မလေးကို ဒူးထောက်တောင်းပန်နေပေမယ့် ပစ်ပစ်ခွါခွါ လမ်းခွဲခံလိုက်ရတဲ့ကောင်လေး (ရုပ်သံ) မိန်းကလေးတွေ အတော်များများဟာ သူတို့ရဲ့သဘောသဘာဝအရ ဖြစ်ချင်တာ ၊ ရချင်တာတွေကို တွယ်ဝိုက်ပြီး ချစ်သူတွေထံတောင်းဆိုတတ်ကြပါတယ် ။ ကောင်မလေးတွေက မရချင်ဘူး ၊ မလိုပါဘူး လို့ပြောလိုက်တဲ့စကားမျိုးတွေကို အခြေအနေ ၊ အချိန်အခါမကြည့်ဘဲ ယုံစားမိခဲ့ရင်တော့ အရိပ်အကဲမသိဘူးလို့ပြောရမှာပါပဲ ။ ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း စင်ကာပူနိုင်ငံက ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဟာ သူမရဲ့ချစ်သူကောင်လေးကို Valentine နေ့အတွက် ဘာပစ္စည်းလက်ဆောင်မှမလိုချင်ပါဘူးဆိုပြီး ပြောဆိုခဲ့ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ကောင်မလေးက အဲ့အဓိပ္ပါယ်နဲ့ပြောလိုက်တာမဟုတ်ဘဲ တွယ်ဝိုက်ပြီးပြောဆိုခဲ့တာပါ ။ သို့ပေမဲ့ ချစ်သူကောင်လေးက တစ်ကယ်ထင်မှတ်ပြီး Valentine Day နေ့မှာ လက်ဗလာနဲ့ရောက်လာပြီး ကောင်မလေးအတွက် ဘားပစ္စည်းလက်ဆောင်မှ မပေးခဲ့ပါဘူး ။ ဒါကြောင့် ကောင်မလေးကအတော်လေးစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်သွားပါတော့တယ် ။ Zhen Yuan Wang … Read more
ဒီလို ယောကျာ်းမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရခဲ့ရင် ည အိပ်ယာဝင်တိုင်းရှိခိုးပြီးအိပ်
တကယ်ချစ်တဲ့ ယောကျာ်းလေး ဆိုတာဒီလိုပါ” ►အနာဂါတ် အစီအစဉ် တခုခု သင့်အတွက် ကြိုးစားနေပါလိမ့်မယ် ►သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေ ရှိနေခဲ့ရင်လည်း အတတ်နိုင်ဆုံး သင့် ဆန္ဒ ကို လိုက်လျောပေးတတ်တယ်…. ►အပိုငွေကုန်ပေါက်တွေ အပျော်အတွက် ငွေကြေးသုံးစွဲတာတွေ လျော့ပြီး သင့်အတွက် လိုအပ်တာလေးတွေ ဖြည့်စည်းပေးဖို့ အသုံးချတတ်ပါတယ်…. ►သုံးနေကျ Password ဖွင့်ပြောပြတာမျိုး ရှိပါလိမ့်မယ်…လျှိဝှက်ချက် ဆိုတာ သူနဲ့သင့်ကြားမထားတတ်တော့ပါဘူး….. ►ဘာပဲလုပ်လုပ် သင့်ဆီက ခွင့်တောင်း တတ်ပါတယ်….တချို့ကိစ္စတွေအတွက် အကြံဉာဏ် တောင်းတတ်တယ်… ►သင်နှစ်သက်တဲ့ အစားအသောက် (ဒါမှမဟုတ်) သင်နှစ်သက်တဲ့ ပစ္စည်းတခုခု လမ်းကြုံတွေ့တဲ့အခါ ဝယ်လာပေးတတ်တယ်…. ►သင် အပြုအမူတိုင်းဟာ သူ့အတွက် ချစ်ဖို့ကောင်းနေပါလိမ့်မယ်…. ►စိတ်ဆိုးတဲ့အခါ ပြဿနာ ကို ပြေလည်အောင်ပြောပြတတ်တယ် ။သင်မှားနေရင်တောင် တခါတလေ သူ့ဘက်က မာနကို လျော့ချထားတတ်ပါတယ်။ … Read more
ချစ်သူကို ရင်ခွင်ထဲမှာ တုန်တတ်သွားစေမည့် အနမ်း (10 )မျိုး
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ တနင်္လာ သားသမီးတွေအကြောင်း တနလာင်္သားသမီးတွေကသွေးအေးတဲ့အပြုံးကိုပုပိုင်ဆိုင်ထားသူတွေပါ အအိပ်နဲ့အစားဆိုနှစ်ခါမပြောရဘူး လာထားဆိုတဲ့အအိမ်မက်အစားမက်သူလေးတွေပါ အရစ်သန်သူလေးတွေဆိုလည်းမမှားပါဘူး မမူးပဲနဲ့ကိုရစ်တာပါ မူးရင်တောင်အဲ့လောက်မရစ်ဘူး ကိုယ့်ခံစားချက်ထက်တပါးသူခံစားချက်ကိုကြည့်ပေးတတ်တဲ့သူတွေပါ ဒါကြောင့်လဲ ခဏခဏနာကျင်ရပါတယ် အပေါင်းဖော်လည်းမက်ပါတယ် မိဘချစ်သူမှမဟုတ်ဘူး သူငယ်ချင်းတွေကလျစ်လျူရှုထားရင်တောင် အရမ်းဝမ်းနည်းတတ်ကြတာပါ သီချင်းတွေကိုအရမ်းနှစ်သက်ကြပါတယ် ဘာလို့လဲဆိုသူတို့စိတ်ညစ်ချိန်ဖြစ်ဖြစ် ပျော်ရွှင်ချိန်ဖြစ်ဖြစ် အနားမှာ အမြဲရှိပေးတဲ့ အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းတွေမို့ပါ အချစ်နဲ့ပတ်သက်ရင်နည်းနည်းတော့ စိတ်ကစားလွယ်တယ် ကလေးဆန်တဲ့အချစ်မျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပါ ဂရုစိုက်ခံရတာကိုနှစ်သက်သလောက် သူတို့ကို ဆရာကြီးလုပ်ရင်တော့ အရမ်းမုန်းပါတယ် စိတ်ဆိုးခဲပါတယ် ဒါပေမဲ့ သူတို့စိတ်ဆိုးပြီဆိုရင်တော့ တကယ့်ကိုဒေါသထွက်လို့ပဲဖြစ်လိမ့်မယ် ချော့လိုက်ပါခဏလေးနဲ့စိတ်ပြေတဲ့သူတွေပါ။ မှန်ရင် Shareလိုက်တော့ တနင်္လာသားသမီးတွေ Unicode ခဈြစရာကောငျးတဲ့ တနင်ျလာ သားသမီးတှအေကွောငျး တနလာင်ျသားသမီးတှကေသှေးအေးတဲ့အပွုံးကိုပုပိုငျဆိုငျထားသူတှပေါ အအိပျနဲ့အစားဆိုနှဈခါမပွောရဘူး လာထားဆိုတဲ့အအိမျမကျအစားမကျသူလေးတှပေါ အရဈသနျသူလေးတှဆေိုလညျးမမှားပါဘူး မမူးပဲနဲ့ကိုရဈတာပါ မူးရငျတောငျအဲ့လောကျမရဈဘူး ကိုယျ့ခံစားခကျြထကျတပါးသူခံစားခကျြကိုကွညျ့ပေးတတျတဲ့သူတှပေါ ဒါကွောငျ့လဲ ခဏခဏနာကငျြရပါတယျ အပေါငျးဖျောလညျးမကျပါတယျ မိဘခဈြသူမှမဟုတျဘူး သူငယျခငျြးတှကေလဈြလြူရှုထားရငျတောငျ အရမျးဝမျးနညျးတတျကွတာပါ သီခငျြးတှကေိုအရမျးနှဈသကျကွပါတယျ … Read more
သင့်ချစ်သူကောင်လေး ဒီအချက်တွေရှိနေပြီဆိုရင်တော့ ဘာမှမစဉ်းစားပဲ လမ်းခွဲလိုက်ပါတော့
သင့်ချစ်သူကောင်လေး ဒီအချက်တွေရှိနေပြီဆိုရင်တော့ ဘာမှမစဉ်းစားပဲ လမ်းခွဲလိုက်ပါတော့ ကိုယ့်ချစ်သူကောင်လေး ဖောက်ပြန်တဲ့အခြေအနေနဲ့ ကြုံတွေ့လာရင် ပျိုမေတော်တော်များများက ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်တင်တတ်ကြပါတယ် … ။ ငါအသုံးမကျလို့၊ ငါပိုက်ဆံမရှိလို့၊ ငါမလှလို့ အစရှိသဖြင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်တင်ပြီး တွေးတော်တတ်ကြပါတယ် … ။ တစ်ကယ်တမ်းတော့ အဲဒီလို ကိုယ့်ချစ်သူကောင်လေး ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာ သင့်အပြစ် မဟုတ်ပါဘူး .. ။ ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ ဗီဇရှိသူက ဘယ်လောက်ပဲ သင်ကောင်းအောင် နေနေပါစေ၊ ဖောက်ပြန်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီနေ့မှာတော့ သင့်ချစ်သူကောင်းလေး ဖောက်ပြန်နေတယ်ဆိုတာကို သိသားစေနိုင်တဲ့ အချက် ၄ ချက်ကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ၁။ သင့်ချစ်သူဟာ သင်နဲ့တွေ့တိုင်း ရည်းစားစဖြစ်ခါစလောက် ဟက်ဟက်ပက်ပက် မရှိတော့ပါဘူး စတွဲခါစ အချိန်မှာဆိုရင်တော့ ကိုယ်နဲ့ ချိန်းတွေ့တိုင်း အမြဲရယ်ရယ်မောမော … Read more